Tamin'ny manakaiky rakotra lavitra amin'ity boky ity-nitandrina ny fitondran-tena (Chapter 2) sy ny fametrahana fanontaniana (Chapter 3) -researchers hanangona tahiri-kevitra momba izay voajanahary mitranga eto amin'izao tontolo izao. Ny fomba rakotra ao amin'ity toko ity-nihazakazaka fanandramana-dia ifotony hafa. Rehefa mihazakazaka mpikaroka fanandramana, dia amin'ny fomba tsehatra eto amin'izao tontolo izao mba hamoronana tahirin-kevitra izay tena tsara mifanaraka amin'ny mamaly fanontaniana momba ny antony-ary-vokany ny fifandraisana.
Mahatonga-ary-vokany fanontaniana dia tena fahita eo amin'ny fiaraha-monina fikarohana, sy ny ohatra dia ahitana ny fanontaniana toy ny hoe mitombo ve ny mpampianatra 'karama hitombo mpianatra mianatra? Inona no vokatry ny karama farany ambany amin'ny asa tahan'ny? Ahoana no mpangataka asa ny hazakazaka ataony ny vintana ny fahazoana asa? Ankoatra ireo fanontaniana causal mazava, indraindray mahatonga-ary-vokany fanontaniana dia tanteraka amin'ny ankapobeny kokoa fanontaniana momba ny maximization sasany fampisehoana mimetatra. , Ohatra, ilay fanontaniana hoe "Inona no loko ny bokotra no hanomezana vahana ny fanomezana ao amin'ny ONG vohikala toerana?" Dia tena betsaka ny fanontaniana mikasika ny vokatry ny samy hafa amin'ny fanomezana loko ny bokotra.
Ny fomba iray mba hamaly antony-ary-vokany fanontaniana dia ny hitady ny Endriky ny-misy tahirin-kevitra. Ohatra, amin'ny fampiasana ny angona avy an'arivony sekoly, dia mety kajy fa ny mpianatra hianatra bebe kokoa any an-tsekoly izay manolotra mpampianatra avo karama. Saingy, no fifandraisany mampiseho fa mahatonga ambony karama ireo mpianatra mba hahafantatra bebe kokoa? Tsia mazava ho azy. Sekoly mpampianatra izay mahazo vola bebe kokoa mety ho samy hafa amin'ny fomba maro. Ohatra, mpianatra any an-tsekoly amin'ny avo ho tonga mpampianatra karama avy amin'ny fianakaviana manankarena. Noho izany, inona no mijery toy ny vokatry ny mpampianatra mety fotsiny fampitahana avy isan-karazany ny mpianatra. Unmeasured ireo fahasamihafana eo amin'ny mpianatra no antsoina hoe confounders, ary amin'ny ankapobeny, ny mety confounders wreaks ilay nandringana ny mpikaroka fahafahana mamaly antony-ary-vokany fanontaniana ny mitady ny Endriky ny-misy tahirin-kevitra.
Iray vahaolana ny olan'ny confounders dia ny miezaka ny hanao fampitahana ara-drariny amin'ny alalan'ny fanitsiana ny azo dinihina fahasamihafana eo amin'ny vondrona. Ohatra, mety ho afaka télécharger fananana hetra angona avy amin'ny maro ny governemanta vohikala. Avy eo, dia afaka ampitahao fampisehoana mpianatra any an-tsekoly izay vidin-javatra an-trano dia toy izany koa fa ny mpampianatra dia samy hafa karama, ary mbola mety ho hitanao fa mpianatra mianatra bebe kokoa any an-tsekoly amin'ny mpampianatra ambony karama. Nefa, mbola maro azo atao confounders. Angamba ny ray aman-dreny ireo mpianatra mitovy ny fari-pahaizana, na angamba ny sekoly mitovy ny akaiky ho bahoaka trano famakiam-boky, na angamba ny sekoly amin'ny ambony mpampianatra karama koa ambony karama ho an'ny talen- sy ny lehibe karama, fa tsy mpampianatra karama, dia tena izay mitombo mpianatra ny fianarana. Afaka miezaka handrefesana ireo lafin-javatra hafa ihany koa, fa ny lisitry ny azo atao confounders no ankapobeny tsy misy farany. Amin'ny toe-javatra maro, ianao fotsiny tsy afaka mandrefy sy hanitsy ho an'ny rehetra ny mety confounders. Izany fomba ihany afaka mandray anao hatramin'izao.
Ny vahaolana tsara kokoa ho ny olana ny confounders dia nihazakazaka fanandramana. Fanandramana hahafahan'ny mpikaroka mba hifindra any an-dafin'ny correlations voajanahary nitranga in angon-drakitra mba reliably namaly antony-ary-vokatry ny fanontaniana. Ao amin'ny Analog taona, fanandramana dia matetika sarotra sy lafo vidy logistically. Ankehitriny, ao amin'ny taona nomerika, ara-pitaovana faneren'ny dia miha-levona tsikelikely. Tsy vitan'ny moa no moramora kokoa ny manao fanandramana toy ny mpikaroka nanao tamin'ny lasa, dia izao azo atao ny nihazakazaka karazana fanandramana vaovao.
Inona no voasoratra aho hatreto aho efa somary tsy mifatotra amin'ny teny, fa zava-dehibe ny manavaka zavatra roa: fanandramana sy randomized fanandramana. Ao amin'ny fanandramana ny mpikaroka hanitsy eo amin'izao tontolo izao, ary avy eo dia mandrefy ny vokatra. Efa nandre izany fomba Voalaza fa "perturb sy mitandrina." Io no tena tetika mahomby amin'ny siansa momba ny zavaboary, fa eo amin'ny fitsaboana sy ny siansa sosialy, misy fomba iray hafa izay miasa tsara kokoa. Ao amin'ny randomized mifehy fanandramana ny mpikaroka hanitsy ho an'ny olona sasany, ary tsy ho an'ny hafa, ary, manakiana, ny mpikaroka izay manapa-kevitra ny olona handray ny fidirana an-tsehatry ny randomization (ohatra, flipping ny vola madinika). Io no miantoka fa randomized fomba fanandramana mamorona fampitahana ara-drariny eo amin'ny vondrona roa: ny iray izay efa nahazo ny fidirana an-tsehatry ary iray izay tsy manana. Amin'ny teny hafa, randomized fanandramana dia ny vahaolana ho an'ny zava-manahirana ny confounders. Na dia eo aza ny zava-dehibe eo amin'ny fanandramana sy ny fahasamihafana randomized fanandramana, ara-tsosialy matetika ny mpikaroka mampiasa ireo teny interchangeably. Manaraka izany aho fivoriambe, fa amin'ny sasany hevitra, aho handrava ny fivoriambe mba hanamafisana ny ilaina ny randomized fanandramana ny fanandramana tsy misy randomization sy ny fanaraha-maso ny vondrona.
Randomized fanandramana efa voaporofo ho fomba mahery vaika mba hianatra momba ny ara-tsosialy izao tontolo izao, ary ao amin'ity toko ity, aho hampianatra anao bebe kokoa momba ny fomba fampiasana azy ireo amin'ny fikarohana. Ao amin'ny Fizarana 4.2, ohatra aho ny fototra lojikan'ny fanandramana miaraka amin'ny ohatra ny fanandramana tamin'ny Wikipedia. Avy eo, ao amin'ny Fizarana faha 4.3, aho mamaritra ny maha samy hafa ny laboratoara fanandramana sy ny saha fanandramana sy ny fahasamihafana eo amin'ny fanandramana sy ny Analog dizitaly fanandramana. Koa, aho milaza fa fanandramana nomerika saha dia afaka manolotra ny tsara indrindra endriky ny Analog laboratoara andrana (fanaraha-maso henjana) sy ny saha Analog fanandramana (realism), amin'ny ambaratonga rehetra, izay tsy azo atao aloha. Manaraka, ao amin'ny Fizarana faha 4.4, aho mamaritra ny foto-kevitra telo-manan-kery, heterogeneity ny fitsaboana vokany, ary ny fomba-izay-dehibe hitondrana fampianarana manan-karena fanandramana. Rehefa heverina izany, aho mamaritra ny varotra-offs tafiditra ao amin'ny tetikady roa lehibe ho an'ny nitarika nomerika fanandramana: manao izany ny tenanao (sampana 4.5.1) na miara-miasa amin'ny ny mahery (sampana 4.5.2). Farany, aho hanatsoaka hevitra amin'ny famolavolana ny sasany toro-hevitra mikasika ny fomba azonao manararaotra ny tena herin'ny nomerika andrana (sampana 4.6.1) ary farito ny sasany amin'ireo andraikitra izay tonga miaraka izany hery (sampana 4.6.2). Ny toko dia aseho amin'ny kely indrindra amin'ny matematika ny fivoasana sy ny teny ofisialy; mpamaky liana kokoa ofisialy, matematika fomba fanandramana dia tokony hamaky ny ara-teknika ihany koa ny Fanazavana Fanampiny eo amin'ny faran'ny toko.